Inona no ultrabook hovidiana hametrahana Ubuntu | Ubunlog
Izay ultrabook hovidiana hametrahana Ubuntu
Ubuntu dia nanjary iray amin'ireo safidy malaza indrindra eo amin'ireo mpampiasa te hanova Windows na macOS ho an'ny Gnu / Linux. Ny fahamoran'ny fampiasana azy ary koa ny rindrambaiko misy ankehitriny dia mahatonga ny mpampiasa an-tapitrisany mampiasa Ubuntu na ny tsiro ofisialy ho an'ny solosain'izy ireo.
Saingy tsy solosaina tsotra no hodinihintsika fa safidy tsy fahita firy nefa malaza tato anatin'ny volana vitsivitsy, tranga iray mitovy amin'ilay novokarin'i Ubuntu tao anatin'ny tontolon'ny Gnu / Linux, nantsoina hoe Ultrabooks ireo solosaina ireo.
Ultrabooks dia kahie izay milanja latsaky ny 1 kilao saingy tsy mampihena ny tombotsoany izy ireo fa ny mifanohitra amin'izay indrindra. Araka izany, ny ultrabook Manana processeur matanjaka izy ireo, tahiry anatiny be dia be, fampangatsiahana passive ary ora sy fahaleovan-tena ora maro.
Manaraka izany dia hiresaka momba ny takiana na ny fitaovana enti-miasa isika inona no tokony hotadiavintsika raha te hividy na hahazo ultrabook hametrahana Ubuntu isika. Na apetrakao amin'ny toerana misy azy na tsia.
1 CPU sy GPU
4 Kapila SSD
8 Safidy izay hividianana ultrabook
9 Ary ultrabook inona no ho fidinao?
CPU sy GPU
Tokony holazaintsika fa ny CPU dia tsy olana lehibe velively amin'ny fametrahana Ubuntu amin'ny solosaina, ny mifanohitra amin'izay no izy. Saingy aorian'ny vaovao farany momba ny maritrano 32-bit, ny ultrabooks izay manana fikirakirana roa na 32-bit farafaharatsiny no safidy farany tokony hofidintsika rehefa mividy ultrabook ho an'ny Ubuntu. Tsy tiako ny milaza ireo zavatra ireo, saingy marina fa Intel CPUs dia tsara kokoa ho an'ny solosaina finday noho ny CPU AMD, noho izany I5, i3 na i7 processeur dia safidy tsara ho an'ny ultrabook ary mifanaraka amin'ny Ubuntu.
Mikasika ny karatra GPU na sary (ity farany ho an'ny veterana be indrindra), tsy izy rehetra no tsara apetraka sy / na hampiasa Ubuntu. Ny olana farany an'ny mpamily Nvidia dia mahatonga ny ATI AMD sy Intel GPU ho safidy tsara indrindra ho an'ny Ubuntu. Ny mpamily ireo marika ireo dia miasa tsara sy tena tsara amin'ny Ubuntu fa marina fa mahery ny Nvidia GPUs.
Ny ram dia tsy tokony ho olana amin'ny fametrahana Ubuntu amin'ny ultrabook. Ny Ubuntu dia tsy mandany fahatsiarovana ram be loatra ary raha tsy ampy ny kinova lehibe dia afaka mampiasa birao maivana toy ny Lxde, Xfce na Icwm isika. Na izany na tsy izany, raha tiantsika ny hanana ny kinova ultrabook ho an'ny taona maro, tokony hanana ondrilahy 8 Gb farafaharatsiny isika na mihoatra. Ny habetsaky ny habetsaky ny habetsaky ny taona dia manana fahombiazana tsara indrindra. Tokony ho marihintsika koa izany manana slot fitadidiana ram maimaim-poana, izany dia hanitatra ny mety ahafahan'ny ultrabook manana fiainana lava, na dia vitsy aza ny maodely manome ireo fahafaha-manao ireo.
Ny efijery dia iray amin'ireo singa manandanja indrindra amin'ny solosaina finday, na ultrabook, netbook na laptop mahazatra. Ny haben'ny sakan'ny efijery ultrabook dia 13 santimetatra. Habe mahaliana izay mahatonga ny solosaina ho mora entina mihoatra ny taloha, fa ny refy 15-mirefy mahazatra kosa dia safidy tsara ihany. Amin'ity tranga ity, safidio ny efijery misy ny teknolojia LED dia safidy tena aroso, farafaharatsiny raha tiantsika hanana fizakan-tena lehibe ny ultrabook antsika.
Ny famahana ny efijery farany ambany dia 1366 × 768 teboka na mihoatra. Ny teknolojia touch dia mifanaraka amin'ny Ubuntu, izany hoe afaka manana efijery mikasika an'i Ubuntu isika na dia marina aza fa ny rafitra fiasan'ny Canonical dia tsy manana an'ity haitao ity tena mandroso, ary koa ireo rindrambaiko sary toa an'i Wayland. Na ahoana na ahoana, ny fomba mahazatra dia miasa tsara.
Raha te hanana ultrabook tsara miaraka amin'i Ubuntu isika mila mitady ekipa misy disk cd isika. Mahagaga ny fahombiazan'ny kapila mafy SSD, farafaharatsiny raha ampitahaina amin'ny kapila nentim-paharazana, ary ny Ubuntu dia mifanaraka tanteraka amin'ity haitao ity. Saingy, izaho manokana dia manoro hevitra ny hisafidy ny safidin'ny kapila mafy cdd, satria misy ultrabooks misy vahaolana mifangaro izay ahafahanao manana tahiry anatiny lehibe kokoa, saingy ratsy kokoa ny fahombiazany. Ny fahaiza-manao izay ananantsika amin'ny resaka kapila mafy dia tokony ho manodidina ny 120 Gb, kely kokoa ny toerana dia tsy ampy mitahiry ireo antontan-taratasinao sy ireo rakitra Ubuntu.
Samy miasa tsara ny teknolojia ao Ubuntu, fa ny voalohany kosa mahomby kokoa noho ny faharoa ary manome fizakantena lehibe kokoa.
Ny bateria dia teboka iray lehibe ho an'ny ultrabook sy solosaina finday. Tena manome ny fitantanana herinaratra lehibe tokoa i Ubuntu, manome ora maro mihoatra ny rafitra miasa manokana. ny Ny batterie 60 Whr dia mihoatra ny ampy hanomezana fahaleovan-tena 12 ora, na dia hiankina amin'ny fampiasantsika ny ekipa aza ny zava-drehetra. Eto dia tsy misy dikany ny fampiasana Ubuntu na Windows, raha mampiasa rindranasa mandany loharanon-karena isika dia hampiasa bateria bebe kokoa ary amin'ny fanitarana dia tsy hanana fizakantena firy isika.
Mitazona ireo fizakan-tena 12 ora tsy maintsy ataontsika izay hahazoana antoka fa ny fifandraisana tsy ampiasaintsika (NFC, Bluetooth, tsy misy tariby, sns ...) dia kilemaina. Ny famandrihana finday avo lenta amin'ny finday avo lenta sy finday ihany koa dia tsy maintsy honoina ao amin'ilay fitaovana na tsy mila izany isika satria hampihena ny fizakantenan'ny fitaovana.
Amin'ny ankapobeny, ny ultrabooks dia manana port sy slots USB voafetra, izay tsara satria mampitombo ny fizakantenan'ny fitaovana ary na dia azontsika atao ny mamono ireo singa amin'ny alàlan'ny Ubuntu mba hofoanana rehefa tsy ampiasaintsika izy ireo ary voatazona ny fiainana bateria lava.
Matetika ny Ultrabooks dia tsy manana seranan-tsambo teknolojia maro na kapila DVD-ROM, izay mahatonga azy ireo ho voafintina, maivana ary mifehy tena. Izay no antony tsy maintsy hijerentsika tsara ireo karazana fifandraisana misy ao aminy. Farafahakeliny port USB roa no ilaina ary koa fifandraisana tsy misy tariby. Raha te hanana ultrabook mahery miaraka amin'i Ubuntu isika Tokony hanana fifandraisana Bluetooth isika, NFC, ny seranan-tsambo USB dia tokony ho karazana C ary farafaharatsiny hanana slot ho an'ny karatra microsd. Solosaina maro no mihaona amin'ireo toerana ireo ary mifanaraka amin'ny Ubuntu.
Ny vidin'ny ultrabooks dia avo dia avo, na dia tsy maintsy ekentsika aza fa ny vidin'ny antonony dia nihena be tao anatin'ny volana vitsivitsy. Afaka mahita isika izao ultrabook tsara mifanaraka amin'ny Ubuntu amin'ny vidiny 800 euro. Marina fa misy safidy lafo kokoa toa ny Dell XPS 13 malaza izay mihoatra ny 1000 euro ny vidiny, nefa mahita ihany koa ireo ultrabooks toa ireo avy any UAV izay tsy mahatratra 700 euro. Ary tsy toy ny rafitra fiasa hafa, misy ultrabooks izay amidy miaraka amin'ny Ubuntu ho toy ny rafitra fiasa tsy misy vidiny nefa tsy mampiakatra ny vidin'ny fitaovana. Na ahoana na ahoana, raha misafidy ultrabook misy Windows isika dia tsy mila miahiahy avy eo Fametrahana Ubuntu dia tena tsotra ao amin'ity karazana fitaovana ity.
Safidy izay hividianana ultrabook
Mihabetsaka ny maodely ultrabook miaraka amin'i Ubuntu. Ao amin'ny ny tranonkala Ubuntu ofisialy afaka mahita lisitry ny orinasa nanolo-tena ho an'ny Canonical izahay mba hampivelatra ny fitaovana mifanaraka amin'ny Ubuntu. Ary koa, ao amin'ny Tranonkala FSF Ho hitantsika ny Hardware izay manohana na manana mpamily maimaim-poana ary mifanaraka amin'izany amin'ny Ubuntu. Raha avelantsika ireo referansa roa ireo dia tsy maintsy jerentsika ny ultrabooks voalohany miaraka amin'ny Ubuntu. Ny orinasa voalohany niloka azy dia ny Dell, izay nanomboka namolavola ny Dell XPS 13, ultrabook miaraka amin'i Ubuntu ho toy ny rafitra miasa mahazatra. Na izany aza, ny vidin'ireo fitaovana ireo dia tena avo lenta ary tsy azon'ny besinimaro, mainka fa rehefa tsy dia malaza ny ultrabooks.
Taty aoriana, teraka ny tetikasa izay manova ny macbook Air ho lasa ultrabook miaraka amin'i Ubuntu, tsy atolotra amin'ny fomba fijeriko noho ny sisa amin'ireo safidy misy.
Ultrabooks koa dia nipoitra izay niaraka tamin'ny Windows fa mifanentana tanteraka amin'ny Ubuntu toy ny Asus Zenbook. Ny fahombiazan'ireto ultrabooks ireto dia nahatonga ny orinasa tanora hiloka amin'ny Ubuntu ho toy ny rafitra miasa ho an'ny fitaovany Ny System 76 sy Slimbook dia namorona ultrabooks mifanaraka amin'ny Gnu / Linux sy Ubuntu. Raha ny momba ny System76 dia manana ny filokana farany azonay indrindra ianao amin'ny famoronana kinova iray nohavaozina tanteraka ho an'ny solosainao.
Raha ny momba an'i Slimbook dia namorona ny Katana sy Excalibur, ultrabooks mifanentana tanteraka amin'ny Ubuntu izy ireo ary tonga miaraka amin'ny KDE Neon ho rafitra fiasa mahazatra. Eo ihany koa ny orinasa VANT, fiaviana espaniola toa Slimbook izay manolotra ultrabooks miaraka amin'ny Ubuntu ho an'ny vidiny mirary. Tsy toy ny Slimbook, ny VANT dia manana maodely ultrabook maromaro miaraka amina fitaovan'ny configurable.
Ary ultrabook inona no ho fidinao?
Amin'ity fotoana ity dia azo antoka fa hanontany tena ianao hoe ultrabook inona no safidiko. Ny safidy rehetra dia tsara, miaraka amin'ny Ubuntu na Windows. Amin'ny ankapobeny, tsara ny safidy rehetra raha raisintsika ny torohevitra momba ny hevitra tsirairay. manokana Tsy hanao ny fanovana ny macbook Air aho satria raha mividy an'ity fitaovana ity izahay dia tokony hanana macOSNoho izany, tsara kokoa ny misafidy ultrabook hafa fa tsy mandany ny vola amin'ny solosaina toy ny Macbook Air ary manafoana ny rindrambaiko.
Tranonkala maro manadihady ny fitaovana miresaka momba ny fitaovana ao Slimbook sy UAV, tena tsara ny fitaovana entiny na dia mbola tsy nosedraiko manokana sy dia orinasa manolo-tena amin'ny Free Software, izay mahatonga ny fitaovan'izy ireo manana fanohanana lehibe. Fa raha ny vola no fihemorana lehibe amin'ny fananana ultrabook miaraka amin'i Ubuntu, ny safidin'ny ultrabook miaraka amin'i Windows ary avy eo ny fametrahana Ubuntu ao aminy dia mihoatra ny atoro anao.
Araka ny hitanao, ny ultrabooks sy Ubuntu dia mirindra tsara, na dia tsy te hanaiky azy aza ny mpampiasa Windows sasany. SAINGY Iza amin'ireo ultrabook no safidinao? Manana ultrabook miaraka amin'i Ubuntu ve ianao? Inona no zavatra niainanao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Izay ultrabook hovidiana hametrahana Ubuntu
Joscat dia hoy izy:
Ampiako ihany fa amin'ny fisafidianana ny tontolon'ny birao, PLASMA 5, 5.12.5 amin'izao fotoana izao dia nohatsaraina tanteraka ary saika hitovy amin'ny fanjifana fahatsiarovana fa tsy amin'ireo birao voalaza etsy ambony, manomboka ny rafitra misy RAM manodidina ny 450Mb.
Tsy misy ifandraisany amin'ny fihinanana fahatsiarovana avo lenta ny kinova 4.
Mamaly an'i Joscat
Joan Francesc dia hoy izy:
Eny, manana Slimbook aho: https://slimbook.es/ ary tena faly aho.
Valiny tamin'i Joan Francesc
Luis Eduardo Herrera dia hoy izy:
Ny ASUS Zenbook dia mifanaraka tanteraka amin'ny Ubuntu. Amin'ny tranga manokana, miaraka amin'ny SSD kely ho an'ny rafitra fiasa ary HD lehibe kokoa ho an'ny antontan-taratasy, sns izay miakatra amin'ny fanombohana. Haingam-pandeha ny baoty ary tsy misy olana amin'ny mpamily na ny tsy fitoviana.
Valiny tamin'i Luis Eduardo Herrera
Manana Slimbook Katana II aho ary tena faly koa 🙂
NARY dia hoy izy:
Manana asus ux501 aho ary tsy afaka mametraka ubuntu 18.04. Ny hany kinova Ubuntu izay mamela anao hametraka azy dia 15.10, manomboka eo ianao manomboka manavao mandra-pahatonganao amin'ny kinova 18.04 (raha ny fanazavako dia havaoziko ny famelana ny firaisankina ho birao).
Ho an'ireo izay te-hametraka azy dia afaka mametraka azy amin'ny solosaina finday na laptop hafa izy ireo ary avy eo mandika azy na manova ny kapila mankany amin'ny Asus Zenbook.
Pepe tavoahangy dia hoy izy:
Raha ny zavatra niainako raha te handefa ny solosaina finday amin'ny serivisy teknika hatrany ianao dia mividiana slimbook anao, tsy isalasalana ...
Valiny amin'i Pepe Botella
John Alca dia hoy izy:
Valiny tamin'i Juan Alca
Andes dia hoy izy:
Eny, ao amin'ny pejin'i Dell no misy ny XPS 13, miaraka amin'ny Ubuntu efa napetraka. Reko tsara ny fanondroana ity fitaovana ity, maivana sy mahery tokoa.
Valiny tamin'i Andino
eU dia hoy izy:
Tsy ratsy ny lahatsoratra, saingy adinonao ny nanonona ny UAV sy Slimbook… ao amin'ny lohateny. Tsy handratra ihany koa ny doka "sponsored spons".
Valio i eU
Eto miaraka amin'ny rivotra Xiaomi 12,5 faly amin'ny Ubuntu 18.04
mkas dia hoy izy:
Vant 1 ary tsy misy intsony. Manana ultrabook 1 fotsiny izy ireo ary maharitra 3 ora na latsaka ny bateria.
Matetika aho aleoko mividy amin'ny orinasa Espaniôla ho an'ny fanohanana, saingy amin'ity tranga ity dia tsy mandray an-tanana izy ireo satria nilaza izy ireo fa ara-dalàna raha maharitra 3 ora fotsiny ny baterian'ny ultrabook tokana misy azy ireo.
Mamaly an'i Mkas
Namana tena tsara, mifandraika amin'ny ondrilahy, ary mamaky lahatsoratra hafa momba ny fisafidianana solosaina finday na ultrabook ary tsy dia voafaritra loatra izy ireo amin'ny filazalazana 8 na mihoatra raha tianao ny ekipa haharitra ela kokoa amin'ny fihazakazahana ireo kinova Ubuntu vaovao. ,
Inona ny fiainana sy ny fiainana bateria amin'ny kahie natao ho an'ny Linux?
Napetrako misaraka ity fanehoan-kevitra ity, satria tiako ho fantatra hoe manao ahoana ny olan'ny fahanterana efa voalamina ao amin'ireo marika ireo izay miompana amin'ny rindrambaiko maimaimpoana.
Ny iray amin'ireo olana lehibe amin'ny kahie dia ny bateria manana puce izay mitatitra fa kely kokoa ny vidin'ny bateria, mahaliana fa maharitra 2 taona eo ho eo ny bateria voalohany, fa ireo azo aorina kosa dia tsy maharitra 6 volana akory.
Raha manana filàna ratsy ianao mba handefasana azy dia mila mividy hafa ianao.
Tsy haiko raha toa ka mitovy ihany ny mitranga amin'ireo kahie "maivana" izay misy ny batery ao anatiny, fa raha manana puce izy ireo, dia azo inoana fa milaza ny fiampangana ambany kokoa izy ireo raha tsy amin'ny counter fotsiny, toy ny cartridges mpanonta ka tsy mety feno, sns.
Loharanom-pahombiazana iray hafa ho an'ny fahanterana efa nomanina ny fametahana puce.
Ny antony dia mandoto tokoa ny firaka, nampivily ny Romanina izany, alao sary an-tsaina!
Noho izany antony izany dia voarara izy io, ary ankehitriny dia potika miaraka amin'ny alloys tsy dia manara-penitra izay manana fotoana kely kokoa ny chips, ka mahatonga ny fiainan'ireo fitaovana ho fohy kokoa ary miteraka fako bebe kokoa. Izany, eny, kely kokoa ny fahalotoana ary tsy azo ampiasaina intsony. Amin'ny fomba ahoana no misy an'io raharaha io amin'ny fitsipika raisina ao amin'ny ekipan'ny UE?
Halako ny mousepad na touchpad lehibe. Tena tsy mahazo aina izy ireo, rehefa tsy mikasika azy ireo amin'ny fanoratana ianao, dia manova toerana na manisy marika sy mamafa ny zavatra nosoratany aza ny mpitaky. Izay iray mandany fotoana amin'ny famongorana ireo fanovana ary manamarina raha tsy misy tsy hita (na misy zavatra tavela izay niniana niniana).
Inona no tsapanao momba ny endrika ergonomika an'ireo kahie linux?
Jorge Ortiz dia hoy izy:
Manana voaroy aho 3 B + ary tena faly aho, miasa tsara aminy. Ny NOOB dia mandany loharano vitsivitsy.
Valiny tamin'i Jorge Ortiz
Ao amin'ny safidy totozy sy touchpad dia azonao atao ny mampandeha fiasa iray izay rehefa manoratra eo amin'ny fitendry ianao dia tapaka ilay takelaka mikasika raha mbola mieritreritra ny hisoroka ny tsindry tsy nahy ianao.
Mampiasa Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (2017) ambanin'ny Linux Mint 19.1 miaraka amin'ny Cinnamon aho, miaraka amin'ny klavier anglisy sy tontonana touchpad lehibe ary olana 0 aotra rehefa miasa mandritra ny 8 ora isan'andro 😀
Ny tsara indrindra rehetra. Mandeha toy ny tifitra io: O
Nampiasa Dell nandritra ny taona maro aho, na amin'ny birao na amin'ny solosaina finday ary mifanentana tsara. Nampiasa solosaina finday 2 Acer aho izao: iray miaraka amin'i AMD sy Radeon, heverina ho gamer io. Ary iray hafa miaraka amin'i Intel i7 8550u, Nvida (tsy tadidiko ilay maodely).
Ny intel, mamela ahy hametraka * buntu fotsiny aho. Miaraka amin'ny Fedora sy openuse dia tsy vita ny fametrahana ary raha averiko indray ny fiezahany hiditra amin'ny rafitra vaovao dia manomboka mandany ny processeur rehetra ary mihamangatsiaka ny laptop. Fa faly be amin'i Kubuntu nanomboka tamin'ny 18.04, ankehitriny 18.10. Na izany na tsy izany, raha misy mahalala mametraka ny Fedora dia tiako izany.
Miaraka amin'ny AMD ampiasaiko amin'ny Windows sy Ubuntu izany.
Manana Slimook aho ary tena faly. ao anatiny no misy Arch linux
Salama, manana Asus ZenBook UX410 miaraka amin'ny i5 aho mandritra ny 3 taona, voalohany amin'ny Ubuntu 16 ary ankehitriny amin'ny Ubuntu 18 ary mandeha tsara izany. Tiako loatra izany fa vao nividy ny zanako vavy kinova ankehitriny mitovy amin'ilay UX410UA ihany aho fa miaraka amin'ny i7 ary mandeha tsara izany. Manana azy roa miaraka amin'ny birao Gnome mahazatra aho ary mandeha tsara amin'ny lafiny rehetra, anisan'izany ny fiainana bateria.
JMeter, manaova fitsapana enta-mavesatra ary refeso ny fahombiazan'ny Ubuntu